कोरोना असर : पुष्प व्यवसायमा दैनिक एक करोड नोक्सान, २५ प्रतिशत व्यवसायी पलायन - कृषि पत्रिका
ललितपुर। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण पुष्प व्यवसायले अहिले दैनिक करिब रु. एक करोड नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ ।
विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीको एकपछि अर्को लहर आउँदा यस व्यवसायले विगत एक वर्षदेखि आम्दानी गर्न सकेको छैन र उल्टो दैनिक करिब रु. एक करोड नोक्सान बेहोरिरहेको छ ।
त्रासकै बीच लामो समयदेखि बन्द रहेको अन्य केही व्यवसाय विस्तारै खुला हुन थालेका छन् ।तर , यो क्षेत्र कहिले खुल्ने र व्यासायले गति लिने विषय अन्योल नै छ ।
उनका अनुसार कोरोना महामारी नहुँदा सामान्य समयमा फूलको दैनिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको थियो तर अहिले मुस्किलले रु. दुई लाखसम्मको मात्र कारोबार हुन्छ ।
२५ प्रतिशत व्यवसायी अन्य पेशामा पलायन :
उप्रेतीले विगत १० वर्षदेखि कलङ्कीमा पुष्प व्यासाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनका अनुसार महामारीअघि वार्षिक रु. १५ लाखसम्म आम्दानी हुने गथ्र्यो तर अहिले अहिले आम्दानी शून्य छ । “दैनिकी चलाउन पनि अन्य विकल्प खोज्नुपरेको छ”, उनले भने।
अघिल्ला वर्षमा वार्षिकरूपमा रु दुईरतीन अर्ब फूलको कारोवार हुने गरेको थियो । तिहार र अन्य मौसममा गरी रु. ११ करोड बराबरको फूल वर्षिकरूपमा विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ । कात्तिकदेखि फागुनसम्म विभिन्न चाडबाड र विवाहको मौसम पर्ने हुँदा फूल बढी प्रयोग हुने गर्दछ ।